परिवर्तनको तेस्रो गीत लोकार्पण | राेल्पा अनलाइन
परिवर्तनको तेस्रो गीत लोकार्पण
रोल्पा, पुस २४ । सञ्चारकर्मी एवम् लोक गायक अशोक वली ‘परिवर्तन’को तेस्रो गीत ‘सम्भव छैन हामी एक हुन’ आज लोकार्पण गरिएको छ ।
उक्त लोक दोहोरी गीतको प्रदेशसभा सदस्य दिपेन्द्र कुमार पुन ‘सिजल’ले लोकार्पण गर्नुभएको हो । गीत लोकार्पण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रदेशसभा सदस्य पुनले बजारमा ल्याएको गीतलाई सफल बनाउन शुभकामना दिनुभयो । ‘गीत त बजारमा आयो’ प्रमुख अतिथि पुनले भन्नुभयो ‘अब सफल बनाउने हात श्रोताहरुको हातमा छ’ ।
राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान रोल्पाको आयोजनामा भएको गीत लोकार्पण कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथि प्रमुख जिल्ला अधिकारी डा. डिजन भट्टराई, अतिथिहरु नेकपा एमाले रोल्पाका अध्यक्ष हरिप्रसाद घर्ती, बार एशोसियसन रोल्पाका जीतविक्रम मल्ल, नेपाल पत्रकार महासंघ रोल्पाका अध्यक्ष मानसिङ विक लगायतले शुभकामना मन्तव्य राख्नुभएको थियो ।
युवा गायक परिवर्तनको यस अघि ‘जीवन जिउन पिरती लाईन्छ’, ‘देश कस्तो बनाउने हाम्रै हातमा छ’ बोलका गीतहरु बजारमा आएका थिए । गीतमा चर्चित गायिका राधिका हमालले स्वरमा साथ दिनुभएको छ । गीत अक्सिजन मिडिया प्रा.लि.बाट बजारमा आएको हो ।
प्रतिष्ठानका प्रथम उपाध्यक्ष दिपेन थापाको स्वागत मन्तव्यबाट सुरु भएको कार्यक्रममा जिल्लाका साहित्यकार, कलाकार, पत्रकारहरुको सहभागिता रहेको थियो । राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान रोल्पाका अध्यक्ष मिलन रोकाको अध्यक्षता भएकोमा गीतको समीक्षा तथा सर्जकको व्यक्तित्वका बारेमा साहित्यकार डि.बी. टुहुरोले प्रकाश पार्नुभएको थियो भने कार्यक्रमको सञ्चालन प्रतिष्ठानका सहसचिव भिम वलीले गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा सहभागिहरुले लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान रोल्पा र गीतका सर्जकलाई आगामी दिनमा पनि जिल्लाको पहिचान बढाउन सुझाव दिएका थिए ।